လှေကား Trend မဟာဗျူဟာ | binary Option ကိုထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
လမ်းကြောင်းသစ်မဟာဗျူဟာ "လှေကား" - Olymp trade
ဒါကြောင့်သူတို့ကွန်ပျူတာများများ၏ရှေ့မှောက်၌လျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းကြကုန်အံ့သောကွောငျ့အတော်များများကုန်သည်များ binary options များကုန်သွယ်ရန်ပိုနှစ်သက်။
ငါတို့သည်သင်တို့အသေးအချိန်ကာလအပေါ်အမြတ်အောင်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖွစျလိမျ့မညျသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, ကိုတင်ပြ။ ယင်း၏အလုပ်လုပ်နိယာမထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်၏ပျက်ပြားဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဆင့်ဂျပန်မီးခွက်၏ "အရိပ်" နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဘယ်လိုပံ့ပိုးမှုများနှင့်တော်လှန်ရေး Levels နဲ့တညျဆောကျလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာ Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
signal "ချ" ကုန်သွယ်မှု
signal "UP" ကုန်သွယ်မှု
ဂျပန်မီးခွက် ရောင်စုံစတုဂံ၏အကူအညီဖြင့်စျေးနှုန်းဇယား၏အထူးကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကိုကြည့်ပါ - ထိုစတုဂံကယ့်ကိုဖယောင်းတိုင်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ အနီရောင်မီးခွက်စျေးကိုဆင်း သွား. , အစိမ်းရောင်သူတွေကိုဆုတက်သွားလေ၏ကြောင်းညွှန်ပြဆိုလို။
ဆီမီးခုံအထက်လိုင်းက၎င်း၏ "အထက်အရိပ်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သောအရာကိုအဆင့်ကိုပြသသည်။ ဆီမီးခုံအောက်ကလိုင်းက၎င်း၏ "အနိမ့်အရိပ်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကာလအဘို့အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအဆင့်ကိုဖော်ပြသည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 1 ဂျပန်ခုံဖွဲ့စည်းပုံ
အလျားလိုက်လိုင်းခုံ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းမှောင်မိုက်အရိပ်၏အခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေကြသည်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးအရိပ် (ကခုခံရေးအဆငျ့ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်), နှင့်အခြားသောထိသာအထက်ရမှတ်ကိုသာအနိမ့်မှတ် (ကထောက်ခံမှုအဆင့်င်) ထိ။
သင်္ဘောသဖန်း။2ဒေသခံပံ့ပိုးမှုများနှင့်တော်လှန်ရေး Levels
မည်သည့်စျေးနှုန်းဇယားကိုစောင့်ရှောက်မည်။ မကြာခင်မှာပဲသင်စျေးနှုန်းက၎င်း၏ "မျက်နှာကျက်" ရောက်ရှိပြီးတော့နောက်တဖန်စက်စက်ကျဖို့အစပြုသည်ဟုမြင်လိမ့်မည်။ ကို "ကြမ်းပြင်" ရောက်ရှိခဲ့ဘဲလျက်, ကအထက်သို့ရွေ့လျားစတင်သည်။ အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ပေးရန်, သင်ဇယား၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအချက်များမှတဆင့်တစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်များ၏အနေအထားသင်တို့ကိုရွေးကောက်သထားသောအချိန်ကာလအပေါ်မူတည်ကွဲပြားမည်ကိုသတိပြုပါ။
သငျသညျထိပ်ပိုင်းက menu bar ကိုအပေါ်ကပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင် "5 မိနစ်" ကိုရွေးချယ်ပါက, တစ်ဦးချင်းစီဂျပန်ခုံငါးမိနစ်အတွင်းသင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုပြသပါလိမ့်မယ်။ သင် "1 မိနစ်" ကိုရွေးချယ်လျှင်, မီးခွက်စျေးတိုင်းမိနစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
သင်အိုလံပစ် TRADE ကို platform ပေါ်တွင် "နည်းပညာပိုင်းအားသုံးသပ်ခြင်း" module ထဲမှာရှာတှေ့နိုငျသောဂျပန်ခုံဇယား, လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အလုပ်ကိုစတင်ရန်:
သင်တစ်ဦးအချိန်ကာလ (အချိန်ဘောင်)5မိနစ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ select လုပ်ချင်သောငွေကြေးကို pair တစုံကိုဖွင့်။ သင်သာဤကာလအတွင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တူညီတဲ့အရောင်၏ယခင်ခုံပေါ်တွင်အနိမ့်အဆင့်ကိုတစ်ပျက်ပြားလည်းမရှိတဲ့အခါသင်ချကုန်သွယ်မှုသငျ့သညျ။ ပုံကိုကြည့်ပါ: ညာဘက်တူညီတဲ့အရောင်၏ဒုတိယတစျခုဖှဲ့စညျးခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအနီရောင်ခုံပြီးနောက်။ ထိုသို့ချယခင်တဦးတည်းပြုသမျှထက်အများကြီးပိုသွား၏။ ဤဒုတိယခုံကိုပထမဦးဆုံးဖယောင်းတိုင်များနိမ့်ဆုံးရှောက်သွားသည်အထိ Now ကိုစောင့်ပါ။ အခုဆိုရင်သင် signal ကိုတိကျသေချာကြလိမ့်မည်။ ဒီနရောမှာသင် binary options များ "ချ" ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အားကောင်းနေလျှင်သင်တဦးတည်းဦးတည် 5-7 အောင်မြင်သောအရောင်းအမှတက်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တူညီတဲ့အရောင်၏ယခင်ခုံပေါ်အထက်အဆင့်ကိုတစ်ပျက်ပြားလည်းမရှိတဲ့အခါသင် UP ကုန်သွယ်မှုသငျ့သညျ။ ပုံကိုကြည့်ပါ: ညာဘက်တူညီတဲ့အရောင်၏ဒုတိယတစျခုဖှဲ့စညျးခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအစိမ်းရောင်မီးခုံပြီးနောက်။ ထိုသို့ယခင်တဦးတည်းပြုသမျှထက်အများကြီးပိုမြင့်တက်သွားလေ၏။ ဤဒုတိယခုံကိုပထမဦးဆုံးဖယောင်းတိုင်အများဆုံးရှောက်သွားသည်အထိ Now ကိုစောင့်ပါ။ အခုဆိုရင်သင် signal ကိုတိကျသေချာကြလိမ့်မည်။ ဒီနရောမှာသင် binary option ကို "UP" ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဇယားပေါ်တွင်မြှားကကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခဲ့အခါအချိန်လေးဖော်ပြသည်။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, စျေးကွက်ကိုမကြာခဏတူညီတဲ့အရောင်အများအပြားမီးခွက်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသော။ သငျသညျတူညီသောအရောင်တစ်စက္ကန့်မီးခုံမြင်ကြပြီသည်အထိသင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မစတင်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤဒုတိယခုံယခင်တစျခုထက် "ရှည်" ဖွရှိပြီးကိုလည်းအထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအဆင့်ကိုဖြစ်စေကျော်ဖြတ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ "Ladder" မဟာဗျူဟာထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးအားလုံး, သတ္တု, ရေနံနှင့်အမျှမည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 09 ထံမှ (သို့မဟုတ်အမေရိကန် session ကိုတက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဥရောပ session ကိုတက်ကြွစွာအခါ (00 မော်စကိုအချိန်: 11 မှ 00 အထူးသဖြင့် 15 ကနေဖြစ်သည့်ပထမဦးဆုံးနှစ်နာရီအတွင်း): ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် 00 မှ 21: 00 မော်စကိုအချိန် ) ။
အရေးကြီးသောအမေရိကန်သတင်းဖြန့်ချိကြသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ဤမဟာဗျူဟာကိုအသုံးချမရသင့်ပါတယ်။ ဤနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်လည်း (: 20 မှ 00 08 မော်စကိုအချိန် 00 ထံမှ) ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အာရှအစည်းအဝေးများကြောင်းသတိပြုပါ။
အဆိုပါကုန်သွယ်အချိန်မီးခွက်၏အချိန်ဘောင်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုမှာ,5မိနစ်ပါပဲ။ ထိုသို့သင်သည်တတ်နိုင်သမျှအမြတ်အစွန်းအဖြစ်ဤမဟာဗျူဟာ၏အချက်ပြမှုများကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
Tags: လှေကားတိုက်ခိုက်နည်းဗျူဟာ, လှေကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းဗျူဟာ, လှေကားမဟာဗျူဟာ Forex, Forex အတွက်လှေကားနည်းဗျူဟာ, ရွေးချယ်မှုများအတွက်လှေကားနည်းဗျူဟာ, လှေကားမဟာဗျူဟာရွေးချယ်မှုများ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု Affiliate Program ကို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးညွှန်ပြချက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးအနိုင်ရနည်းဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုကြေးငွေ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ